सेक्सको यस्ता प्रकार, के तपाईंलाई थाहा छ ? | Hamro Doctor News
सेक्सको यस्ता प्रकार, के तपाईंलाई थाहा छ ?
यदि तपाईं पनि अन्य कपल जस्तै मध्येको एक हुनुहुन्छ, जसलाई लाग्छ कि उनले आफ्नो सेक्स लाइफमा सबै ऐडभेन्चर गरिसकेको छु भने तपाईंको यो सोचाई गलत हुन सक्छ । सेक्स बेडरूममा मात्रै होइन बरु विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईंले यो तरिका अपनाउनु भएको छैन भने अब जान्नुहोस्...
धेरै नसोच्नु र बेडरूमबाट बाहिर आउनुस् । आफ्नो बेडरुमलाई राम्रो सँग सजाउनुस र पार्टनरलाई सरप्राइज दिनुस । उनको मनपर्ने खानेकुरा र परफ्यूमले रुमलाई आकर्षक बनाउनुस । तपाईको पार्टनर निकै खुसि हुनेछ ।
कहिले काहि पार्टनरसँग होलिडे मनाउन जाँदा तपाईं रुमबाट कुनैपनि बेला बाहिर नै नस्किेको अवस्था आएको छ । हजुर, यो पनि सेक्सको एउटा तारिका हो जो तपाईं पनि अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ होला । यसको लागि तपाईं होटेलको क्याफेबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ । पार्टनरलाई आफ्नो सेक्सी स्टाइलले रुम सम्म लग्नुस र आफ्नो रोमान्टिक तरिका अपनाउँदै जानुस । रात वितेको पत्तै हुँदैन ।
बदमासी युक्त सेक्स
सेक्सी लुगा लगाएर पार्टनरको पछाडीबाट उनको आँखा बन्द गरिदिने । पार्टनरलाई थाहा नदिई बेडरुम र विस्तारै बाथरुममा लग्ने । उनको कपाल सुमसुम्याउने जस्ता काम तपाईंको पार्टनरलाई मन पर्न सक्छ ।
विहान उठिसकेपछि जब आँखामा रातिको निद्राको नसा रहि नै रहन्छ त्यस बेला यस्तो सेक्स गर्नुमा अवश्य पनि मजा नै आउने छ । कम्फर्ट अर्थात् विना कुनै हतार र टेन्शनले गरिने सेक्स । विशेषगरि विदाको दिन यस्तो सेक्स गर्नुपर्छ जसले तपाईंको पुरा दिन राम्रो सँग वित्ने छ ।
पार्टनर सँग लडाई झगडा भएको र तपाईंलाई के गरौं भन्ने समझमा आइराखेको छैन की सबै राम्रो कसरी गर्ने भने राम्रो मेकअप गर्न सक्नुहुनेछ । राम्रो आकर्षक मेकअप गरेर पार्टनरलाई केही नभनी चुम्बन गर्नुस् । तपाईंको पार्टनरले तपाईंको भावना आफैं बुझ्नेछन् ।
(नवभारत टाइम्स अनलाईन संस्करणबाट)
Last modified on 2018-09-02 09:50:27